Ònye bụ copywriter na ihe ọ na-eme?
Taa, ọtụtụ ndị na-achọsi ike ịchọta ego site na Ịntanetị, n'ihi ya, ịrụ ọrụ n'ụlọ dịka onye na-edepụta ederede na-enweghị ihe mgbakwunye maka ọtụtụ ndị bụ uru na-enweghị isi, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ n'enweghị isi n'ụlọ oche gị. Ọzọkwa, ọtụtụ mgbasa ozi na-anọchite anya ọrụ a dị mfe ma ọ dịghị achọ nkwadebe siri ike. Ma obu nke a, ka anyi gbalịa ichota ya.
Kedu ihe ị chọrọ ịma ma nwee ike ime?
Ihe ịga nke ọma nke ọrụ ahụ ga-adabere dabere na nghọta onye copywriter na ihe ọ na-eme:
O di nkpa inwe ohere di omimi na otutu omuma ihe di iche iche nke ndu di iche iche;
ọ dị mkpa ịnwe mmemme ụlọ ọrụ iji mepụta akwụkwọ dị na doc, dox, txt;
ọnọdụ a na-enweghị atụ bụ mmuta nke copywriter;
ndị ahịa na-enwe ekele maka ike ịmepụta ederede nwere ike ịgụta na ọ bụghị naanị na-ebu ụfọdụ ozi n'ime onwe ha, kama edere ya na ụdị nwere ike ịnweta na nghọta, na ihe ndị dị na ha na-egosi n'ụzọ ziri ezi na mgbe niile;
onye na-edegharị ihe, ọ bụkwa onye na- enweghị onwe ya , onye "na-ese n'efu": ọ na-ezube oge ya, ma ọ ghaghị imezu iwu ahụ n'oge, ya bụ, ọ dịghị onye napụrụ ya ihe ndị a chọrọ ịdọ aka ná ntị;
n'ihi na copywriter dị mkpa ikike ịde ederede a na-ere ere, nke ọ na-enweghị mgbasa ozi ọ bụla na-arụ ọrụ, ma e nwere onyinye nkwalite nzuzo ma ọ bụ unobtrusive;
mgbe ọ na-ede ederede, ọ ghaghị ịgbaso iwu ụfọdụ ma mezuo ihe ndị chọrọ n'aka onye ahịa, ma maka ndị ahịa dị iche iche, ha nwere ike ịdị iche. Tụkwasị na nke a, a na-anwale ọrụ ya maka iche iche.
Isi ihe dị mkpa n'ịhọrọ ọrụ bụ ọkwa nke ịkwụ ụgwọ, ya mere, onye ọ bụla chọrọ ime copywriting, nwere mmasị na ole copywriter na-enweta.
Enwe nke ndị na-edepụta akwụkwọ na-enweghị onwe ha
Ụgwọ ụgwọ ọrụ ya na-adabere, na mbu, na ike ya imezu ihe niile onye ahịa chọrọ na ọsọ ọsọ. Echela na ị nwere ike ịrụ ọrụ na ụlọ site n'aka uwe aka gị ma nweta nnukwu ego n'otu oge ahụ. Enweta uru ebe a na-adabere na nkà gị na oge ego.
Onye na-edepụtaghachi akwụkwọ bụ ọrụ, ya bụ, ọrụ nke, na-emeri ya, na-enweta ego . N'ezie, na mbụ, o yighị ka ị ga-atụ anya nkwụghachi ụgwọ dị ukwuu, mana ka oge na-aga, iji nweta nkà ọrụ, ịnwere ike ịnweta site 300 ruo 1000 cu. kwa ọnwa.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịghọta ihe onye editọ edere nọ n'ụlọ, ị nwere ike ịhazi ọrụ gị n'ụzọ dị otú a nke ga-ewetara gị ezigbo ego, ọbụlagodi ma ị hapụ ụlọ gị.
Olee otú esi eme ego n'ejighị ụlọ?
Kedu ka esi ebipụta akwụkwọ nke gị?
Onye ndu na onye ndu
Oge ikpe oge
Onu ogugu uru - gini bu ihe odi mkpa maka ihe ghoro ya?
Ọrụ kachasị mma
Kedu otu esi esi ghọọ onye nchịkwa ahịa?
Ọrụ kachasị akwụ ụgwọ
Esi esi esi nri ginger maka ihe nfe?
Ụdị yoghurt maka achicha
Moonshine si apricots
Gwyneth Paltrow na Brad Falchak kwadoro njikọ ahụ
Kedu esi ewepu loggia?
Ụmụ Adriano Celentano
Na-egbuke egbuke na T-shirts
Kedu ihe ị ga-ahụ na Anapa na gburugburu ya?
Utu isi maka ụmụ okoro
Gịnị mere nrọ nrọ?
Uwe ogologo maka ụmụ nwanyị
ZHirovik n'azụ ntị
A na-akwụ ụgwọ - ihe ị ga-eme?
Onye na-eri mmiri nke sodium chloride n'oge ime ime
Kara Delevin gụgharịrị ntutu isi ya maka ọrụ dị na fim na nwa Will Smith
Ceres - ihe omuma di omimi banyere chi nwanyi oge ochie
Ụlọ nke Ụlọ Mmiri